Izindaba - Ama-Wzrod Ahlala Ema Namakhasimende
Kusukela ngoMashi wonyaka ka-2020, i-COVID-19 yasakazeka ngokushesha eYurophu naseMelika, izindawo lapho amakhasimende ethu atholakala khona zathinteka kakhulu futhi zavalelwa.Ngaleso sikhathi, isimo se-COVID-19 besilawulwa kahle e-China futhi ochwepheshe bezokwelapha baseShayina bafingqe uchungechunge lwesipiliyoni nezindlela mayelana nokuvikela kugciwane futhi uhlale uphephile.
Ukuze wabelane ngalolu lwazi olubalulekile namakhasimende akwa-Wzrods, abasebenzi bakwa-Wzrods benza umyalelo futhi bathumela kukhasimende ngalinye.Umdayisi wakwa-Wzrods naye wayelokhu exhumana namakhasimende ewachazela ngezinyathelo zokuphepha.
Enye indlela, Yize imaski yezokwelapha yayisenomkhawulo futhi ibiza eChina ekuqaleni kuka-2020, abakwaWzrods bathenga imaski yezokwelapha engama-7000pcs futhi bathumela kumakhasimende angaphezu kwama-40 njengesipho samahhala sokusiza amaklayenti okunzima ukuthola imaski futhi anikeze nezindleko zokuthutha zomhlaba wonke ezimba eqolo. kwabanye babo
Isipho esifudumele samukelwe kakhulu ngamakhasimende, futhi amakhasimende aphendula i-Wzrods ngokubonga nangokwazisa.
Isikhathi sokuthumela: May-17-2021